'सरकारी अस्पताल बन्द गराएर प्रजातान्त्रिक समाजवाद आउँछ ?'
‘सरकारी अस्पताल बन्द गराएर प्रजातान्त्रिक समाजवाद आउँछ ?’
अभियान पनि दुई किसिमका हुन्छन्, एक, समाजवादी र अर्को हो पूँजीवादी । गोविन्द केसीको अभियान तथा माग समाजवादी हो कि पूँजीवादी हो ? अनशनको बौद्धिक आयाम के हो ? अनशनको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक आयाम के हो ? यो प्रश्नको अर्थपूर्ण बहस गर्न जरुरी छ ।
मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा व्याप्त रहेका विद्यमान बेथितिहरुको छलफल गरी उचित सुधारको माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीको १५ ओटा अनशन खर्च भइसकेको छ, अहिले उहाँ १६ औं पटक अनसनरत हुनुहुन्छ । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई राजनीतिक अस्वस्थताले घेरिरहेको समयमा गोविन्द के.सी सक्रियताका साथ सरकारलाई दबाव दिने काममा लाग्नुभएको छ। यसलाई सकारात्मक मानौं । तर सोच्नुपर्ने विषय के छ भने, अहिलेसम्म १६ औं पटकको अनशनसम्म आइपुग्दा पनि उहाँको माग पूरा नभएको जिकिर छ।
के के.सी.को. सबै माग जायज छन् ? के गोविन्द के.सी. सरकारलाई आलोचना मात्रै गर्ने राजनीतिक कोशिसमा त हुनुहुन्नँ ? अथवा केसीलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्दै त छैनन् ? डा. केसीको अनसनबारे धेरै कुरा रहस्यकै गर्भमा छन् । अहिले डा. गोविन्द केसी सोह्रौं सत्याग्रहको उत्कर्षमा हुनुहुन्छ, जसको उल्लेख्य बहस भई नै राखेको छ। उहाँको पक्षमा आवाज र विरोधको क्रम जारी छ।
आग्रह, पूर्वाग्रहका सतह मिचेर राजनीतिक दल, शुभेच्छुकहरु लगायत समर्थन र विरोध गर्नेहरुले उहाँको बारेमा सतही विचारको खोलो बगाउने बेला पनि यही नै हो । जे–होस्, उहाँको मागले के कति स्थान पाएको छ अर्थात, अनशनको उपलब्धि के छ ? त्यो खोज्नुपूर्व मेडिकल क्षेत्र अनशन बस्नुभन्दा अगाडि कहाँ थियो ? १५ औं पटकको अनशनपश्चात् अहिले कहाँ छ ? यसबारे चिन्तन गर्न जरुरी छ ।
समाज तथा राष्ट्रका हरेक कुनाकुनामा जारी गरिने जुनसुकै अभियान पनि दुई किसिमका हुन्छन्, एक, समाजवादी र अर्को हो पूँजीवादी । गोविन्द केसीको अभियान तथा माग समाजवादी हो कि पूँजीवादी हो ? अनशनको बौद्धिक आयाम के हो ? अनशनको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक आयाम के हो ? यो प्रश्नको अर्थपूर्ण बहस गर्न जरुरी छ ।
डा. केसीको अभियान अहिले नेपालको मुल कानूनलाई नै निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। समाजवादको मुकुण्डो भिरिराखेका काङ्ग्रेसीहरु अनशनको राजनीतिक आयामको अर्थपूर्ण छलफल गर्न चासो देखाउँदैनन्, जति देखाउनुपर्ने थियो। माग पूरा नभए माइतीघर तताउनुपर्छ भन्ने सानो सोंचमा मात्र नै उनीहरु बिलाइरहेको अवस्था छ यतिखेर। छट्पटाइरहेका बिरामीलाई आकस्मिक कक्षमा छोडेर आफू आन्दोलनका लागि माइतीघर मण्डला दौडनु कत्तिको समाजवादी सोंच हो वा पूँजीवादी सोच हो ? त्यसको राजनीतिक आयाम केसीको समर्थनमा होडबाजी राख्ने चिकित्सकहरूलाई नै थाहा होला। राष्ट्रकै हितलाई ध्यान दिएर मात्र अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने डा. केसी लगायत अन्य मेडिकल विज्ञहरुले अनशनबाहेक अरु केही बिकल्पबाट सरकारलाई दबाव दिनुपथ्र्यो।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुरा सिंहदरबार बसेर उपचारका लागि जापान, अमेरिका, कोरिया, थाइल्याण्ड लगायतका देशहरुमा जाने नेताहरुलाई होइन, सम्बन्धित मेडिकल क्षेत्रका विज्ञहरुलाई दिनुपर्छ। यो कुरामा सरकार अलिकति चुकेको नै छ । तर, यसो भन्दै गर्दा सरकारले केसीको मागलाई ध्यानै नदिएको पनि भन्न मिल्दैन। स्वास्थ्य शिक्षाका सुधारको साथै अन्य आर्थिक सामाजिक सुधारको सवालहरुलाई ब्यवस्थित गरेर सरकार अगाडि बढ्न खोज्दैछ। यो कुरा बुझ्न गोविन्द केसीको समर्थकहरुलाई बुझ्न केही समय लाग्न सक्छ र लाग्छ पनि। त्यसैले उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रिनु पनि स्वभाविक नै भएको छ।
मेडिकल शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीलाई केही अल्पकालीन राजनीतिक मुद्दा बोकाइएको उनका अभियन्ताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले सार्वभौम संसदलाई बन्धक बनाउने नियत राखेको भन्दै बौद्धिक तथा युवा जनमत उनको मागसँग असहमत देखिएको कुरा पनि मिडियामा बाहिर आएको छ।
अनशनलाई नियमित गर्दै जाने केसीको प्रवृत्ति “अलोकतान्त्रिक हठ” नै हो। उनको अनशनले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि नै चुनौती खडा गरिदिएको छ। सरकारले तय गरेको नियम कानूनभन्दा कोही पनि माथि जान सक्दैन। त्यसमा पनि एक सरकारी कर्मचारी भएर अनशनमा बसिराख्दा आम सर्वसाधारणमा के–कस्तो सन्देश गएको छ । यो कुरा केसी र उनका अभियन्ताहरुले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हो र बुझ्नुपर्छ।
मेरो विचारमा गोविन्द केसी राजनीतिक मामिलामा चिप्लिएका छन्। यसमा उनले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारको साथै अन्य आर्थिक तथा सामाजिक सुधारको सवाललाई ब्यवस्थापन गरेर लड्ने तरिका र दायरासमेत फराकिलो पार्नुपर्दछ। त्यसरी मात्र उनको अनशनले सामाजिक विकृतिका विरुद्ध दिशानिर्देश गर्न सक्छ ।
Tagsअनशन डा. गोविन्द केसी दिनेश अर्याल
वडादशैं : देवकाे मुक्ति र महिषासुरकाे बधकाे मिथक
‘आजको युवा र राजनीतिक चेतना’
प्रधानमन्त्रीज्यू, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातकाे मतियार नबन्नुस् : रवीन्द्र मिश्र